Nokia 7: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမှုကိုအတည်ပြုသည် Androidsis
Nokia ယခု 2017 ၏အဓိကဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖင်လန်ကုမ္ပဏီသည်ထူးချွန်သောဖုန်းများအပါအ ၀ င်ဖုန်းမြောက်မြားစွာကိုဖြန့်ချိခြင်းဖြင့်တစ်ကျော့ပြန်လာခဲ့သည် Nokia က 8။ ဒီဖြန့်ချိမှုများကသင့်ကိုယူဆောင်လာသည် ကုမ္ပဏီဖို့အလွန်ကောင်းသောရလဒ်များကို.
La အလယ်အလတ် ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိသင်အများကြီးပျော်ရွှင်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်ကိုတင်ပြသည်။ အကြောင်း Nokia က 7။ လူကြိုက်များမှုအတွက်ဖြန့်ချိသောကိရိယာ ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစား အရာကုမ္ပဏီမှပို။ ပင်အောင်မြင်မှုဆောင်ကြဉ်းရန်ကတိပေး။
El Nokia7သည် Android 7.1.2 Nougat တွင်အလုပ်လုပ်သည်မှတ်သားထားရမည်မှာ Nokia သည်၎င်း၏ဖုန်းများအားလုံး update လုပ်ရန်အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက် Oreo။ ဒီတော့ဒီကိရိယာကအဲဒီစာရင်းထဲမှာပါ။ ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းသည်လူအများအာရုံကိုဆွဲဆောင်သောအရာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ဒီဖုန်းဟာ bezel-less display craze နဲ့ဝေးသွားပါတယ်။
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Nokia 7
2 စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်သော Nokia 7
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Nokia 7
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အထက်နှင့်အောက်ပိုင်း frames များကို သူတို့ကအတော်လေးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်သိသာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကစတိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အချက်များနုတ်ပါဘူးပေမယ့်။ Nokia7မှာa၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် Full HD resolution ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်း Snapdragon 630 ပရိုဆက်ဆာနှင့် Adreno 508 GPU အဖြစ်ဖြစ်သည်။
ယင်းကြောင့် RAM နှင့်သိုလှောင်မှု, Nokia ကအဆင့်မြင့်ခံထိုက်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုလောင်းသည်။ ရွေးချယ်ရန် RAM configurations နှစ်ခုဖြင့်ဖုန်းကိုဖွင့်သည်။ 4GB သို့မဟုတ် 6GB။ သိုလှောင်မှုအတွက်သင်၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာရှိသည် 64 GB ကို။ မိုက်ခရို SD မှတစ်ဆင့်ချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ၊ မရှိကို Nokia မှမပြောသေးပါ။ သူတို့မကြာခင်အဲဒီလိုလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဒီ Nokia7ရဲ့ဓာတ်ပုံအပိုင်းကအလယ်အလတ်တန်းစားအတွက်စိတ်ပျက်စရာမရှိပါဘူး။ The ရှေ့ကင်မရာ ဖုန်း၏5megapixels, aperture,f/ 2.0 နှင့်အတူ။ The အနောက်ကင်မရာက 16 megapixels ပါ dual-ton LED flash နှင့်f/ 1.8 aperture ပါရှိသည်။ သူလည်းမပါဘူး ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းမှုနှင့်အတူ 3.000 mAh ။
စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်သော Nokia 7
ဖုန်းက အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင်တရုတ်၌စတင်ရောင်းချမည်။ အခြားစျေးကွက်များ၌၎င်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ယခုသတင်းအချက်အလက်ကိုမကြာမီထုတ်ဖော်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသော်လည်းယခုအချိန်အထိဘာမျှမသိသေးပါ။ စျေးနှုန်းအတွက်, သငျသညျကိုသိသည်အတိုင်းဤဗားရှင်းနှစ်ခုရှိပါတယ် Nokia က 7.
အတူဗားရှင်း RAM ကို4GB အထိ အကြောင်းကိုစျေးနှုန်းရှိလိမ့်မယ် 287 ယူရို ပြောင်းလဲမှုရန်။ အတူဗားရှင်း RAM ကို6GB အထိ ၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူအတန်ငယ်ပိုမိုစျေးကြီးဖြစ်လိမ့်မည် 346 ယူရို။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အရောင်နှစ်မျိုး (အနက်နှင့်အဖြူ) ဖြင့်ဖြန့်ချိမည်။ Nokia မှဤပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်ကိုသင်မည်သို့ထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Nokia 7: Nokia ရဲ့ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်
၎င်းသည်သူပေးထားသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အနည်းငယ်စျေးကြီးသည်မဟုတ်လော။ ကျွန်ုပ်သည် Blackview S4 ကဲ့သို့သော 64GB / 4GB၊ ကင်မရာ ၄ ခုနှင့် ၁၈.၉ အကန့်အသတ်မရှိသောမျက်နှာပြင်ရှိဖုန်းများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည်။ ၎င်းသည် ၁၂၇ ယူရိုသာကုန်ကျသည်။